Badbaado haween, adaa ku badhaadha!. W/Q. Khaalid Ismaaciil Yuusuf. |
Badbaado haween, adaa ku badhaadha!. W/Q. Khaalid Ismaaciil Yuusuf.
Waa tobankii barqonimo, waa xagaa aad u dabayl badan. Burco marka hore ba waa magaalo siman oo ka dhisan bogcad carro cas ah. Xilligan siigo ayaa meel iyo jiho kasta kaaga imanaysa. Dad badan baa meesha tuban; rag
madaxa cumaamado ku duubtay bay u badan yihiin. Goobtu waa Siirooga, badhtamaha magaalada. Waa la dareemayaa in bishii Ramadaan dadka tabcaan ka dhigtay, waa se ay sii dhammaanaysaa oo maanta ku 25 (shan iyo labaatan) waa-soobax ayaa la sooman yahay.
“Hargeysa kan baa tegaya” ayaa nin ujeeddada aan u socdo wax uu ku aqoonsaday aan garan waayey uu cod dheer ii gu yidhi. Aniga oo aan weli jawaab celin ayaa uu gacanta ila haaday oo ii jiiday dhanka gaadhi MARK II, midabkiisu caddaan yahay, oo dabadu u furan tahay taagnaa.
Afar qof ayaa gaadhiga fuushan. Kursiga hore waxa fadhiya oday aad u buuran, shaadh buluug caddaati ah iyo koofiyad madaw ayaa ii muuqda inta uu hu’ sito, sigaar aad mooddo in uu mar keliya ku dhammee is leeyahay ayaa uu si ba’an u jiidayaa. Hoosta ayaa aan iska idhi haddii uu cudurdaar haysto miyuu dadka ixtiraamo. Kuraasta dambe oo afar qof loogu talogalay waxa sii fadhiya saddex haween ah. Isla marka aan daaqadda furayba waa ay xaamxaamteen, oo dhan iskugu lugo du’deen. Intii aanan gaadhiga wada gelinba odaygii xagga hore fadhiyay ayaa cod wayn oo aad mooddo in uu gaadhigaba ka gariiriyay ku yidhi “hore u fadhiiso, bal ha innaga dhaqaaqa uune” in aan fadhiyo, ayaa aan ugu war celiyay. Xaggii dambe ee gaadhiga furnaydna durba laba wiil oo dhallinyaro ah baa korsan.
Waa kan iminka ayaa lacagtii nalaga gurayaa. Nafar iyo laba iyo toban doollar ($12) in aanu bixinno ayaa lana faray. In lacagta waddanka la iigu sheego aad baan u jeclaan lahaa, meel kasta se lacagtan qalaad baa ka shaqaynaysa. Waxa keliya ee aanu hadda jeclaan lahayn waa in mar uun gaadhigu ka dhex baxo siigadan in ay nagu asoorayso aad mooddo.
Rakaabka badankoodu ma aha dad hadal badan, odayga se xagga hore fadhiyaa mar qudha afka iskuma darayo, muxaadiro gaadhiga ka baxaysay isaga ayaa ay ku hoos diciiftay.
Filsan waa xaaskayga. Waa gabadh dheer oo aad u cas, hilib buurni xiga ayaa ay leedahay. Sanqaroorka dheer ee gammaanku cawryay, indhaha iyo sunnayaasha isku ladhan ee cawl la moodka ah iyo afka culayga ah ee saabka u ah ilkaha dhuuxa u eg, ayaa badh ka ah quruxda Rabbi ku galladay. Kubabka waaweyn ee buuxa, cududaha cuddoon ee xaadda leh, dhexda dhuuban ee taako qabadka ah iyo qoorta dheer ee garaaryuhu waageereen ayaa dhammaystiraya quruxdeeda. Isku fasal ayaa aanu ahayn dugsigii hoose/dhexe oo dhan. Xisaabta ayaa ay aad u jeclayd, sayniskana waa ay ku fiicnayd. Anigu wax macallin qoro xisaabta ayaa aan u necbaa, sayniskana dirqi baa aan ku baasi jiray. Maaddooyinka kale se waa la ii dabo fadhiisan jiray. Waa sababta keentay in dugsigii sare aan qaato Arts-ka, Filsanna Science-ka.
Ilaa yaraantii waa la isku kaayo xaman jiray. Toddoba sanno ka hor ayaa aanu se aqal galnay. Waqtigaa waxa aan ahaa u qaybsanaha Soomaaliya iyo Soomaalilaan ee hay’ad Ingiriis ahayd oo sannad ka hor dalka laga caydhiyey markii looga shakiyay mijo xaabin qarannimada waddanka ah.
Waqtiga aanu ku jirnaa waa mid waayihiisa leh. Garab siin iyo caawimo ayaa ay labada qoys ee aanu ka soo jeednaaba nooga fadhiyaan. Guuleed ayaa ah wiilka aanu ku curannay, waxa hoos uga yar Gaasira oo ay isku-nuug yihiin. Guddoon ayaa iyana laba gu’ hoos uga sii yar. Iminka uur laba bilood ah ayay Filsan leedahay.
Muddo sitimaan ah baa aan ka sokeeyaa Hargeysa. Ku sinnaan sanad, ma aan shaqayn, wixii kayd noo ahaa oo aan buurnayni na saddexdii bilood ee hore ayaa ay naga soo saareen. Bakhaarka raashinka oo aannu macmiil fiican u ahayn in waxoogaa ah ayaa uu isna noo samray. Afar bilood ayaa uu wixii guriga looga baahnaa, laydhkii iyo lacagtii dugsiga wax ay kaga baran jireen labada waaweyni uu tunka u ritay. Halkaa se na ma uu dhaafin karayn.
Baahi wal oo jirta ma jecli wax waydiinta dadka. Waxa aan se ka fursan waayey in aan horjoogaha dugsiga ugu cawdo kharash la’aanta iyo awood darrida iga haysata bixinta lacagta uu Guuleed wax ku barto. Warbixin aad ii yididiilo gelisay ayaa uu iga siisay waxbarashada wiilka. Waxa uu iigu laab qaboojiyay in dugsigu u baahan yahay, laga dhaafayna kharashka.
Filsan ayaa aan kula noqday go’aanka hormuudka dugsiga una sheegay in aan dib loo soo eryi doonin lacag awgeed.
– Filsan: Cabdi wiilkeennu guriga ha inoo fadhiyo.
– Aniga: Waayo gacaliso?
– Filsan: Waad ogtahay in uu shalay ku dhex diiday ubadkii uu la cayaarayay. Labadii bilood ee u dambeeyey habeen kali ah si fiican u ma ay cashayn, qureecda maalinna waa aynnu u waynaa dharaarna waa aynnu u helnaa. Ma dedaal yarid oo kuuli ayaa aad marna heshaa kolna ku soo hungowdaa. Farahaaga aan aqoon si sibidh loogu qaado waa kuwan dhagaxa iyo jaajuurku jarjareen. Weli saddex maalin oo isku xigta ma aad wada helin shaqadan baas. Marka aad sii baxayso ee aan ku sii jalleeco adiga oo dhexda ka soo ciiray albaabka ayaa aan saacad ka sii laalaadaa, anoo ooyaya. Waa kan oo laydhkii waa la innaga jaray faynuuskana bayteriyo ugama adkin.
Halkaa marka ay marayso ayaa ilmo indhaheeda ka timi ay gacanta ku tirtay, hadalkiinna ku soo koobtay: waxba yaa aanay wax inoo baran, intii ay cidla ku dhici lahaayeen agteenna ha innoogu bakhtiyeen.
Aayar aayar ayaa aan gidaarkii aan ku tiirsanaa uga siibanayey, ilaa lugahaygu fidsameen badhidayduna dhulka taabatay. Madaxayga ayaa isna gidaarka cuskaday, indhahayga oo sare eegaya sidii qof naftu ka sii gurmayso ayaa ilin burqaday, dibinta ayaa aan se qaniinsanahay si aan dhawaq iiga soo bixin.
Filsan jilbaha ayaa ay dhulka soo dhigtay, madaxeeda ayaa na ay laabtayda saartay. Waxa baxay eedaankii salaada maqrib.
– Filsan: Kac Cabdi afuranee, ayaa inta ay indhahayga oo hooraya dhunkasho ku qallajisay cod naxariis badan ugu tiraabtay.
– Filsan: Haa sarreen macaan baa uu ahaa, waa kii xalay suxuurtii ka hadhay. Guuleed ayaa faro-fareeyee afka laga ma qaadeen. Ayaa ay tidhi. Inta ay disti ayna dul fadhiisisay daboolka ka qaaday. Inta aan hadal iga soo bixin ayaa ay sufur biyo ku jiraan afka iigu qabatay, gacanteeda iyo koobkii baa aan isku qabtay, biyihiina aan cantuugay, madaxa ayaa aan soo qabtay afkana ka dhunkaday, biyihiina badhkeeda sidaa ku siiyey.
– Filsan: waa oohintii Gaasira. Inta ay tidhi ayaa ay degded u boodday. Anigu waa aan ogahay in ay gaajo ka dhawaajisay. Inta ay sii socotay ayaa ay Guddoon ku dartay oohintii, anna degdeg uga dabo kacay oo sii laalaadsaday distidii aanu ka afuraynay. Madbakha ayaa aan isku sii daayey, oo girgire daasad ka samaysan shalayna dab lagu shidaa ugu dambeysay ka gilgilay dambaskii saarnaa. Dhuxul huube u badan ayaa aan dul toomiyey, girgire xamari ag yaalayna dhimbiilo in ay besaan dambas lagu hadoodilay lagaga ilaaliyay ka faqay oo ku huriyey girgirihii aan u diyaariyey shiditaanka.
Aniga oo afuufaya ayaa ay Filsan oo inantii ay u kacday lullulaysaa igu soo baxday.
– Filsan: Waar Cabdi maxaad falaysaa?
– Aniga: Uma jeeddid miyaa in aan dab hurinayo?
– Filsan: Laakiin wax la kariyaa ma yaallaan!
– Aniga: Ka warran hadii aan dib sarreenka ugu kariyo, sonkorna ugu daro?
– Filsan: Haa, biyo ku jilci si uu boorash ugu noqdo. Ayaa ay igu tidhi inta ay qolkii dib ugu noqotay.
Durba dabkii wuu ii baxay, intii aan afuufayeyna dambas ayaa indhaha I buuxiyey. Qaaddo ku jirtay distida ayaa aan ku kaakiciyey raashinkii, biyo yarna waa aan ku walaaqay. Inta aan dabka saaray ayaa aan orod is dhigay. Nin aanu jaar nahay ayaa aan isku maqiiqay, albaabka gurigana ku garaacay. Isaga ayaa iga furayba! Kun shillin ayaa aan su’aalay aniga oo aan salaaminba. Ma garan karo wejigiisu in uu is bedelay iyo in kale, oo meel kale ayaa aan ka ceelshubayaa. Guriga ayaa uu dib u galay, iguna soo laabtay iina soo fidiyey shan kun oo isku taal.
Isla markiiba waa aan is rogay, dukaan agtayada ahna daf idhi. Sonkor ayaa aan gabadh dukaanka haysay iga iibi ku idhi. Inta ay miisaysay ayaa aad iigu dheerayd.
Markii ay ii dhiibtayba aniga oo sii socda ayaa ay iga daba tidhi “hoo baaqiga”, dhegse uma aan dhigin. Albaabkii aqalkayga oo sii furnaa ayaa aan hiinraag ku galay, isna dul taagay dherigii oo is laba rogaya; sonkortii oo bac ku xidhnayd inta aan dalooliyay ayaa aan badh ku shubay, walaaqidna ku bilaabay, ka dibna daboolkii saaray. Waa aan kacay oo laba jabcadood isa soo ag qotomiyey. Dabka ayaa aan ka dhigay hadda, kuna shubay jabcadihii midkood si aan ta kale ugu qaboojiyo. Isla markii ba dhanka qolkii ay Filsan carruurta ku haysay ayaa aan ula taw idhi. Inta aan Gudoon oo ay laabta ku hayso ka qaaday ayaa aan dhabtayda saaray, iyana soo sare fadhiisisay Guuleed iyo Gaasira oo beerka dhulka ku haya. Aniga iyo Filsan ayaa midba jabcad qabsaday oo ku cashaysiinnay ubadkii.
Durba waa ay gam’een oo gaajo ayuun bay la tawaawacayeen. Degdeg baa aan u kacay. Si aan gogosha ugu diyaariyo inta aan faynuuska sii diciifayaa damin. Waa kan aanu albaabka u soo celinnay, aniga iyo xaajiyadduna u kacnay xagga qolka hurdada. Markii aanu albaabka furnay ayaa aanu iftiinkiisa ku beegsannay sarriirta.
Labo barkimo oo sariirta saarnaa ayaa aan ku tiiriyay gidaarka ay ag taalay. Kuna tiirsaday, Filsanna laabtayda madaxeeda soo saartay oo lugaha fidsatay. Hal eray ma aanu is odhan timeheeda ayaa se aan faraha la galay. Sidaa ayaa waagu noogu beryay, oo anoo weli soo jeeda xaasku indhaha kala furtay.
– Filsan: Cabdi weli miyaa aad soo jeedaa gacaliye?
– Aniga: Waan gam’i waayey mcn.
– Filsan: In aan ku weydiiyo ma ay ahayn, waa aan seexan karay adiga oo dhafraya. Ma ihi qof wanaagsan.
– Aniga: I dhegeyso noloshaydiiyeey.
– Filsan: Hee gacaliye, ayaa inta ay sujuuda dhunkasho igala soo tiigsatay I tidhi.
– Aniga: Burco ayaa maanta aan tegayaa, ayaa aniga oo dhabankeeda salaaxaya aan hoos u idhi.
– Filsan: Inta ay gacantaydii iska qaaday dibna u fandhiisatay si qummanna hortayda uga soo jeedsatay tidhi “haye, kadibna?”
– Aniga: I fahan qaali, waxa jira nin aanu mudo dheer saaxiib afka wax kula goosta ahayn, oo aanaan waqti dheer war kala helin. Waxa aan dharraar dhawayd maqlay in uu Burco ganacsi fiican ku yeeshay. Isaga ayaa aan u baryo tegi kol wax aynu carruurta ku iidsiino aan uga soo helo.
– Filsan: waayahay orod duco ayaan ku raaciyee.
Sahra waa ku kan, da’daadu waa 27 gu’. Waxbarashada jaamacadeed ee aad sanad ka hor soo af-meertay ayaa kuu horseeday shaqada fiican ee aad hayso. Aabahaa waa oday dhaqmeed aad looga dambeeyo, hooyana ganacsiga beeyada ayaa Alle u barakeeyay.
Sheekooyinka ayeeydaa Dhudi kaaga sheekayso ayaa ragga ku nacsiiyey. Uur-ku-taallo iyo murogo wax aan ahayn kama dhaxashid. Waayo-aragnimo se in aad ka qaadatay ayaa ay u iigu muuqatay.
Habeenkii iskugu kiin dambaysay waxa aad fadhideen barandaha guriga geed maacaleesh ah oo ku hor yaalay, albaabka wayn ee ganjeelka ah dushiisa ayaa dayaxa si u iftiin badani ka soo muuqdaa, laydh qabow oo aad jeclaysanaysaana waa ay idin babinaysaa. Habaryartaa Koos ayaa ay kuu waday qisadeedii. Sidan ayaa ay kuugu bilawday:
[“Sahraay, waxa ay ahayd Koos hablaha aan dhalay ta ugu da’ wayn. Maalintii aanu gudnay subaxnimadeedii maqal baa ay kambalka la joogtay. Islaan da’deedu sideetanka cago-cagaynayso ayaa aqal-soomaaliga ii dhex fadhida, gabadh Xaawa la odhan jiray oo aanu ood wadaag nahay, ayaa aan xalay sii balamiyey in marka ay xoolaha kala foofiso ay ii soo jarmaaddo, iyaduna waa soo dhex hawaartaa aqalka.
Burcad iyo dhiil biyo ah ayaa islaantu ii dirtay, dhakhsana u soo ag qotomiyey. Iyana afka ka furtay kiish uskag badan, kana soo qubtay makiinado, irbad iyo mandiil kuligood dhiig ku qalalay. Guntiisa ayaa ay haddana ka soo saartay marooyin isku dhegdhegay oo aan badnayn. Guntigana ka soo saartay xadhko miiq miiq ah.
Koos waxa ay figta ka saaran tahay geed yar oo sogsog amma yubbe ah. Muuqayga sidaada ay u aragtay ayaa degdegsiimo uga soo degtay geedka, igana soo hor oroday.
In aanu maqasha ka soo wada noqono waa ay ku faraxsanayd oo aan Gadiid oo iyada ka yaraa kaga nimi, mase ay ogayn waxa ay mudan doonto.
“Naa inta aan qorraxdu inagu kululaan hore u soo fadhiisi” ayaa islaanta inanta gudi doontaa cod gargariiraya ku tidhi. Udub dhexaadka aqalka inta aan fadhi ugu tiirsaday oo dhabta ku soo fadhiisiyey, ayaa aan dhabarkeeda laabtayda ku tiiriyey, lugeheedana fidiyey, Xaawa ayaa labadii lugood midna kaga fadhiisatay tii kalena islaanta u fidisay, iyaduna hoosta gashatay oo lugihii kala geeyeen.
Koos waa ay garawsatay in ay shirqoolan tahay, barroor af labadii ahna dhawaaqday.
Sakiin af beeshay baa ay xubintii taranka labadii dibnoon ee sare midba dhan uga saaftay, oo ku kirkirtay. Kintirkii ayaa ay gunta ka soo rujisay oo gargarriirkii gacanteedu xaga hoose ee xubinta si ba’an wax ugu yeeshay. Dhiig aan neef geel ah ka qubteen baa ka butaacay. Waxba waa ay ka arki wayday dhiiga, si jidhka inanta ay u toshona kolba marooyinkii uskagu isku dhejiyey dhex marisay nabarradii ay kala wadhay. Qodxo ayay iskugu qabatay dibnihii sare, dun irbad ugu jirta ayaa ku xejisay oo qodxihii uga saraysiisay. Ayeeyo waxa aad moodaysay in ay karbaash tollayso. Dallool aan dabo jiir mari karin ayaa ay kaadida u banaysay.
Koos mar hore ayaa ay oohintii awood u wayday, afkuna kala tegay.
Labadii lugood ayaa ay ka kaceen, oo aanu xadhig ku seetaynay min bawdo ilaa suul.
Koos maalintaas baa caafimaad ugu dambaysay. bil kasta oo bilata naf ka eeg ayay noqon jirtay.
Lugta ay ka dhutin jirtay, waxa ay ka dhaawacantay maalintii gudniinkeeda. Show inkaar qabtadii lafta wayneed ee Xaawa ayaa jilibka kaga fadhiday kalana boodsiisay, wayna ku bogsatay.
Mar walba waxa aanu ku rajo waynayn in marka la guursado ee ay aqal gasho caafimaad heli doonto. Ugu yaraan, waxa aanu ku laab-qaboojisan jirnay in ay caadadu caadi u soo dhaafi doonto. Wax ka bedelan ayaa se dhacay.
Wiil geeljire, doob guun ah, dhumucna Wayne siiyey ayaa la tegay habaryartaa. Geel labaatan tuldood ah, qori iyo faras barroor ah ayaa laga qaatay.
Habeenkii gaafka markii loo kala tagay ayaa inanta masiibo kale ku habsatay.
Markii loo kala darreeray ee uu doonay in uu naagaysto ayaa ay aad isu adkaysay, oo difaac isku dayday. Cabbaar buu la galgashay oo loodin waayey. Ceeb buu ka baqayaa! Hadii uu kala jari waayo naanays xun baa hor taal. Si uu taa uga hortago ayaa uu ablay af badan iska soo dhuftay, feedh jilibna muruqa bawdada ku madoobeeyay oo ay qaadi kari wayday, lugtii kalena dhan iskaga qabtay, madaxana gacan bilaa naxariis ah dhulka ugu saaray.
Waa meel tigtigane waxba waa u marin waayey, oo gaal-leeftii ku bannaystay. Meeshii oo dhiigu soo booday ayaa uu ku jujuubay xubinkiisii. Waa doob isku tuntaye, mudo ayaa uu ku ruqruqayey dhiigiina dib ugu celiyay.
Isbuuc gaw ah ayaa ay yaalliin ahayd.
Sahraay, inantaydaasi maalin nolol fiican ma ay arag. Haa, hablaha ay isku waqtiga yihiin ayaa ay kala sinnayde belo u goonni ah ma ay ahayn.
Aroor hore ayaa wiilkii Koos qabay nagu waa bariistay. In xaaladii inanta u dhaxday oo fool ahayd ay liidato ayuu bariido noogu ladhay, xaaladeedu in ay xun tahayna carrabka ku adkeeyay.
Halhaleel ayaa aan labo kabood iyo garbosaar u soo dhufsaday. Dhabadii reerka uu ka yimina cagta u saarnay. Wax aanu sii jarmaadnoba duhur dheer baa aanu aqalkii fooda gelinay. Waxa naga hor yimi dhiig aad tog moodo. Hore ayaa aan uga sii tallaabsanay xinjiro guntamay oo meesha wadhnaa. Docda aqalka ayaa ay daadsan tahay, dirac hun ah oo ay xidhnaydna sida uu dhiigu ugu marmay in ay mudo dhex galgalatay ayaa aad ka arkaysaa. Goobtaas ayaa ay iyada iyo ilmhii uurka ku jirayba ku naf waayeen”]
Sheekadaa iyo tobaneeyo ka xanuun badan ayaa aad ayeeyo ka gunuday. Wixii dumarka lagu hayey ayaa aad odorostay, noshooda imikana barbar dhigtay. Hoosayn, yasid, cidhiidhi iyo hagardaamo haweenka lagu hayo ayaa aad si kasta u dhugatay. Boqolaal hablood oo aad taqaan ayaa aad arrintooda falanqaysay, kolba dhimbiil kululna kugu shiday.
In han iyo himilo kastaa kugu dhex dumi doonto sidii kuwii kaa horeeyayba, ayaa kuu muuqday. In waxa dhulkan dadkiisu idinku hayaan adoonsi yahay baad isku qancisay. Cadaawad iyo tartan muuqda ayaa aad bilawday oo inan rageed uurka ugu gunnuday.
Urur haween ayaa aad madax u tahay, oo xaq iyo xuquuq ugu raadisaa xaawlayda; karti aad ku hagto oo lagugu majeertana waa aad muujisay.
Gaadhigii Burco naga keenay weli jidka ayuu ku jiraa, anigu se mawjadihii qoyska ayaa aan dhex mushaaxayaa. Qiiqda joojiya uu waduhu qabtay, qaylada dumarka iyo hayaaydii odayga ayaa iga toosiyey suuritaankii aan ku jiray. God waddada ka qodnaa ayuu baabuurku ku dhacay, qof wax ku noqday ma uu jirin, gaadhiga se dhaqaaq dambe laga filan maayo. Candhada iyo afarta taayir ruqumtii haysayba waa ay ku daayeen. Daaqadaha ayaa aanu boobnay, urtii taayiraduna na sirsirkhaysay.
Dawakhaaddii ayaa qofba meel is yuururiyey, inantani se dabada ayaa dhagax la heshay. Qorraxda aad moodo in ay dhakadayda u soo biyaysatay, waxa waxoogaa naga qaboojinaya dabaysa nagu dubur-dhabanaysa.
– Walaal ma wax baad noqotay? Ayaa aan aniga oo dhankeeda ku sii socda si naxariis leh u waydiiyey.
– Maya! Ayaa ay iyada oo sii foorarsanaysa si dhibsasho ka muuqato iigu war-celisay.
– Gaadhi kale ayaa la inoo diri. Ayaa aan u celiyay.
– Ma kala jecli socosho iyo nagaansho! Ayaa ay iyada oo lugaha dhulka ku xoqasa I tidhi.
– Waayo? Ayaa aan si yaab ku jiro u boobsiiyay.
– In uu rogmado oo aan ku dhinto ayaa aan ku tamaniyey.
– Walaashay ma dhib kale ayaa jirta?
– Waa ii gaar.
– Halkeed ku socotay? Ayaa aniga oo fahmi la’ waxa ay geerida u muhatay aan ku idhi.
– Haa, ma garanayo meesha aan ku socdo.
Intii hore taagni ayaa aan ku waraysanayey, iminka se waa aan hor kambadhuudsaday. Wax kasta oo ay kalsoooni ay iigu waranto aan kaga mutaysan karo ayaa aan isu geeyay. Aakhirkii waa ta warkan I siisay.
[“Waxa aan ahaa gudoomiso urur haween oo aad u firfircoon, aniga ayaa dhidibbada u taagay, fikirkiisana lahaa. Nolol iska fiican ayaa aan ku noolaa, waxa jiray rag badan oo guur iga dalbay, kana gaws adaygay. Waa ay ku jireen niman badan oo wanaag lagu majeeran jiray, iima se cuntamin in aan reer yeeshaa. Cabsi badan baa aan ka qabay nolosha qoysnimo.
Laba bilood ka hor ayaa aniga oo ka soo baxay xafiiskayga xilli fiid ah gaadhi la I hor joojiyey, daaqada dambena si dhakhso ah loo furay, saddex wiil oo da’deedo u dhaxayso 25 ilaa soddon ayaa ka soo daatay. Si jujuub ah bay igu saareen afka iyo indhahana maro igaga xidheen. Waxa la iga dejiyay baabuurkii aniga oo aan jiho iyo meel aan ku suganahay midna garanayn.
Kolba mid baa i kora oo iga danaysta. Ma garanayo tirada rasmiga ah ee ay ahaayeen, ugu yaraanse labaatan jeer waa la isu kay bedelay intii aan miyirku iga tegin.
Waxa aan soo miiraabay aniga oo aal dhakhtar la iguna buuqsan yahay. Isku furan ayaa la iga daweeyay, wax aan garan karo.
Bil ka hor ayaa aan ogaaday in aan uur leeyahay. cid aan u raaco iyo cid aan ula ciirsado midna ma garanayo.
In aan cay ugu dhex noolaan waayo bulshada waxa igaga xanuun badan fadeexadda reerku la kulmi doono, iyo sida la iigu ceebayn doono aabo. Taasna waxa igaga daran magaca la siin doono ilmaha caloosha ku jira. In uu garac noqon doono, in aanu ku noolaan karin bulshadan dhexdeeda iyo in aan ugu yaraan nololba loo ogolaan doonin ayaa ii sawiran.
Gunnimada wiilashayada soomaaliyeed igu faleen iyo gar iyo garawshiiyo la’aanta bulshadaydu ma jirto cid aan ula ciirsadaa. Waxa aan isku qanciyey in aan tahriibo.
Ugu yaraan hadii aan bedqab ku gaadho dhul gaalo, waa ay I xannaanayn, I koolkoolin oo ilmaha nolol u ogolaan.
Ma joogi karo meel soomaaliyi ku nooshahay. Waanan ku noolaan karinba!”]
Sahra qofnimadeedii waa ta sidan loo bedelay. Waa iyadii, inantii kartida iyo aqoonta lahayd. Waa lafteeda tan uur-ku-taallo iyo calool xumaan buuxisay la fadhida dhul aanay aqoon. Wax sahay ah ma wadato, marka laga tegi waayo konton dollar ($50) oo gacanteeda ku qoyay.
Dood iyo hogotusaalayn badan waxa aan ku qanciyey in ay ugu yaraan dhawr cisho Hargeysa ku sii nasato.
Waxa jeebka dambe iigu jira laba boqol oo dollar ($200) oo uu saaxiibkaygii aan u tegay I soo siiyay. In uu iga war hayn doono ayaa uu balan qaad aan ku diirsaday iigu carrab laalaadiyey.
Intii aan gaadhi kale nalagu wareejin ayaa golcastu godka u dhawaatay, xaamxaamashadii iyo kala wareegiina gabalka noo dumiyeen.
Odaygii juuq dambe kama aanu maqal ilaa aanu Hargeysa soo galnay. Rakaabkii meeshii uu gaadhigu ku ekaa kaga degay ayaa uu dhinac ka raacay. Wadihii ayaa aan se anigu ku qanciyey in uu na gaadhsiiyo guriga oo naga dheeraa.
Filsan oo aad moodo in ay gaaraacistayda albaabka garatay ayaa naga furtay, iskuna kay duuduubtay. Inta aan labada dhaban ka dhunkaday ayaa aan idhi “marti baa ila socota si fiican usoo dhawee”
Yaa! Waa ayo inantani? Ayaa ay igu soo celisay. “is barta oo horta fadhiisi” ayaa intii aan hadalku afkeeda ka soo wada dhammaan ku idhi.
– Aniga: Filsan kaalay.
– Filsan: I sug waar inanta biyo aan u dhigee, oo aayar hadal yaan carruurtu nagu toosine.
Lacagtii aan siday ayaa aan farta ka saaray. In ay casho horta ka samaysyo ayaa aan u raaciyey gacantaydii aan u fidiyey.
Durba qorrax bax iyo gabal-dhac keliya ayaa ka hadhsan ciidii. Shalay ayaa aanu carruurta kaxaynay. Dhar qurux badan ayaa aanu ku soo taagnay. Filsan iyo Sahra oo I wehelinayey ayaa iyaguna laba xijaab oo isku midab ah toshay. Macawis abu-sarande ah, shaadh iyo go’ shaal ah baa ay ii xuleen.
Subaxdii ciida saddexdii carruur ahaa, aniga, Filsan iyo Sahri wada jir baanu ugu jarmaadnay dhankii garoonka xaafada ee lagu tukanayey.
Salaadii markaanu ka soo baxnay ayaanu wada jir u soo jeedsanay. Filsan baa soo jeedisay in aanu aniga iyo Sahri carruurta suuqa u kaxayno iyana qado sii diyaariso.
Ka sokow in ay Sahra iyo Filsan isku joog iyo jimidh yihiin, weji-saar ayaa ay wadataa Sahri. Waa sababta dhawr qof oo aanu is garanaynay Filsan ugu maleeyeen.
Farxad ayaa ay carruurtu ka heshay leexooyinka iyo giraamaha barxaddan loo diyaariyey in ubadka maalmaha ciida ku qaataan. Qosol iyo raynrayn badan ayaa ay Sahra lafteedu dareentay. Baska ayaa aanu soo fuulay markii duhur soo dhawaaday.
Guriga waxa aanu ugu tagnay Filsan oo weli ku hawlan diyaarintii qadada. Guuleed iyo anigu masjidka ayaa aanu aadnay. Sahrina hawshii baa ay dhankeeda ka gashay.
Waxa aanu soo noqonay iyada oo qolkii fadhiga darin la sii fidiyey cunto urteedu naga raagtayna soo kamkamayso oo lagu teediyay.
Intayadii ayaa harreeraha ka fadhiisanay. Qosol iyo kaftan intayada waaweyn dhex socod u ah ayaa aanu ku qadaynay.
Aad baa ay isu xog waraysteen Filsan iyo Sahri. Si laab furan ayaa ay wax badan u naqdiyi jireen. Gunta hoose ayaa mid waliba ta kale u gaadhay, qalbi xaadhni is fahan ku ladhan yahay ayaa ay wadaageen.
Si aad u qiimo badan ayay nolosha u darseen. Cidna farxada ay kala heleen ka ma ay qarsoomi karin.
Markii aanu ka iidnay weli baaqi noo hadhsanaa waxa aanu ka dhiganay raashin yar oo maalmo na wada, iidaankiisii iyo laydhkii oo aanu dib usoo gashanay.
Caawa cawayska ayaa aanu ku raagnay, kolba Sahra iyo Filsan ayaa dhan iga wada mara. Qosol ay isu jiibinayaan ayaa ay iigu awood sheeganayaan.
– Sahra: waaryaa Cabdi kaca waa xilli dambee.
– Filsan: Alla hoognay! Oo waa labadii habeenimee.
– Aniga: Ina kici. Sahraay habeen wangaagsan,
– Filsan: Sahra berri haddii hurdadu nala tagto na kici, yaan yaryarku dugsiga ka daahine.
– Sahra: iska hurda anaa qureecda marka aan diyaariyo idin kicine.
– Aniga: I kici aan kula diyaariyee. Inta aan idhi baan qosol kaftannimada hadalka muujinaya ku sii xoojiyey.
Gelitaankii aanu hurdada galnayba, Filsan inta ay degdeg albaabka u xidhay ayaa ay gacanta I qabatay oo iyada oo weli I haysata fadhiiso I tidhi. Gartay in ay wax si uun u muhiim ah ii sheegi doonto. Farahayga ayaa kuweeda dhex gelisay.
Qudbad dheer baa ay bilawday. Wanaagga Sahra iyo dhibta qabsatay ayaa ay si walba iigu hogo tusaalaysay. In aan gurmad aadaminimo, mid islaamnimo iyo mid soomaalinimoba mudan tahay ayaa ay ku celcelisay. Alle in uu u gargaarkeeda noogu naxariisan doono ayaa ay si caqiibo leh ii dhex qaadsiisay. Intaaba in aan ogsoonahay, kana indho saabnayn ayaan ku qanciyey.
Sida aanu u badbaadin karno ayaa aan su’aalay. Marna se ma aan filayn jawaabta Filsan. “Cabdi inanta guurso”. “maxaad tidhi? Guurso miyaad tidhi? Ayaa aan si yaab iyo u qaadan waa ah u weydiiyay. “Haa” ayaa ay iigu war celisay.
Kun su’aalood baa maankayga ku kulmay ilbidhiqsi gudihii. Mar waan naxay, kol qoslay, mar baa aan is idhi waa masayr oo waa ay idiin kala shakiday.
– Aniga: Filsan miyaadan caadi ahayn?
– Filsan: Cabdi waan ahay.
– Aniga: Maxaad ku hadlaysaa markaa?
– Filsan: Si fiican ii dhegeyso, in badan baa aan ka fekeray arrintan, si walba waan u rogrogay, xal kan ka fiicanna waan waayey.
– Aniga: Bal soo jiifso waagu ha inoo beryo’e, ayaan aniga oo sii kacaya idhi.
– Filsan: Cabdi waqti aad ku fekerto caawa oo keliya ayaa aad haysataa. Weligeen muran inama dhex iman, hadal kuguma aan soo celin, arrin aad iila timidna kaa ma aan diidin. Waan ogohay hore uma liqi kartid, halka Sahri taalo aniga oo aal ka soo qaad.
Sidaa ayaa ay ku jiifsatay. Aniga se markaas ayaa qorraxdu ii soo baxday. Fikir dhan walba ah ayaa aan galay. Hayntayda ayaan is tusay. Sii jirida qoysnimada aniga iyo Filsan in arrintan ugubka ahi duulaan ku tahay ayaa daaqad aan ka arkay.
Indho isuma aan keenin xalay. Markii Sahri qureecda noo kicisay ayaa aan sidii wax hurda isu ekaysiiyey. Inta ay Filsan isku kay soo rogtay ayaa ay dhegta igaga qaylisay. Sidaas ayaanu wada jir ugu qureecanay.
– Filsan: Cabdi waa taa Sahri carruurtii dugsiga u kaxaysay, I sii go’aankii aad gaadhay.
Waxa aan bilaabay hubsiimo run ahaanta arrintan ah. Markii aan xaqiiqsaday sida ay uga go’an tahay ayaan hadal ugu soo koobay: ma xuma bee, maxaan reerkoodu ku weydiistaa? Ma af qudha ayaa inaga soconaya? Jawaab aad moodo in ay u sii diyaarsanayd ayaa ay I siisay: Cabdi inanta waa la raadinayaa, dadkoodii in lala tegay ayaa aynu uga dhigaynaa. Si aynu ugu qancino in uu aabeheed kuu hibeeyo ma waayi karno.
Waa sax. Ma kala hadashay arrintan Sahra? Ayaan su’aalay.
Maya Cabdi. Iminka marka ay soo noqoto ayaa aynu u bandhigaynaa.
Si niyad samaani ku jirto ayaa ay dood ka dib noola qaadatay Sahri. Isla subaxdiibana garaacday hooyadeed. Wax la isku ooyaba in aabeheed Hargeysa u soo baadi doonay ayaa ay Sahra hooyadeed noo sheegtay. In ay bed qabto dhibina jirin ayaa ay hooyadeed ugu bushaaraysay.
Kol hadii odaygii magaalada nala joogo, wax badan baa furfurmi kara.
Dhigidii telefoonka Sahri dhigtay waxa ku xigay wicitaankii aan aabeheed wacay.
– Aniga: Asalaamu calaykum.
– Odaygii: Wa calaykuma salaam, waa kuma?
– Aniga: I garan maysid iminka adeer, waa aynu is barane halkeed joogtaa.
– Odaygii: Waar Hargeysa ayaan ku suganahay.
– Aniga: Qudhaydu iyada ayaan kula joogaa, war kii Sahra na waa aan kuu hayaaye halkeed ka joogtaa?
– Odaygii: Maxaad tidhi? Sahra ayaan warkeeda hayaayaa?
– Aniga: Haa, wayna bed qabtaa ee I tilmaan.
– Odaygii: Iminka istaankii Wajaale ayaan taaganahay. In aan Itoobiya ka raadiyo ayaa ii qorshaysnayd.
– Aniga: Sahra lafteedu magaalada ayaa ay inala joogtaa. Halkaa igu sug aan kuu imaadee,
– Odaygii: Waayahay adeer.
Waa oday aan Sahra la kala garan. Iminka ayaa ay cirro teelteel ahi ku soo dhigaysaa. Si aan u aqoonsado in aan waco uma aan baahan.
– Aniga: Adeer sow Sulub adiga ma aha?
– Odaygii: Haa, adeer ma wiilkii ila soo hadlayey ayaa aad tahay.
– Aniga: Haa adeer. Halkan ayaa aynu bas ka raaci doonaa. Waxa aynu ugu tegi halkii Sahri joogtay.
– Sulub: Oo aad u jeclaa in aan xog intaa ka badan siiyo ayaa si degen bal waayahay ii yidhi.
Intii aanu jidka ku soo jirnay aniga iyo Sulub safarkiisa iyo daydayga Sahra dhibta ka qabsatay wax dhaafsan isma aanu waydaarsan.
Markii albaabka Guuleed naga furay ayaa Filsan iyo Sahra oo wada fadhiya daaradu nasoo daymoodeen. In cabaar ah ayaa ay laabta aabeheed Sahri ku ooyaysay. Qolka fadhiga oo loo sii diyaariyey ayaa ay Filsan u kaxaysay labadii is dhalay.
Si ay ugu warantay ba, waa ay ku qancisay arrintii, u sheegtay hayni sida ay iga tahay, xaaska aan leeyahay iyo nolosheeda aanu shimbirka u noqonayba.
In berri uu isu kaayo meheriyo ayaa balan aanu ku qaadanay. Wuu se naga diiday in uu halkan caawa jiifsado. Waxa uu kaftan noogu yidhi: sodoggu ma aha in uu guriga inantiisa jiifsado.
Gaar inta uu iigu yeedhay ayuu lacag $500 ah ii dhiibay, iina raaciyey “Ha igu diidin waa qoyskaygii ka lagu unkayaaye. Adeer tii aan idhina, inta uu garabkayga midig gacantiisa saaray ii raaciyey: Berri baad dib iigu keeni, oo qosol igaga dhaqaaqay.
Subaxdii ayaa ay Filsan I kicisay. Dharkii ay iida ii soo xuleen oo si fiican u kaawiyadaysan iyo quraac beer ah baa ay isku kay ag dhigtay. Markii aan afka iska tiray, dharkiina isku jufay ayaan laba oday oo raaska ah hore u raadsaday, kobtii balantana u sii kaxeeyay.
Waxa aanu u tagnay Sulub iyo odayo ay isku hayb yihiin oo na sii sugayey. Kaftan bilaa turxaan ah kadib waa la ii meheriyay Sahra.
Hal habeen ayaa Filsan iyo Sahri wada foosheen. Laba wiil ayaa saacad ifka usoo kala horeeyay. Labaduba waa ilma Cabdi.
Saddex sano ayaa laga joogaa maalintii ay Sahri noloshayda ku soo biirtay. Gurigii afarta qol ahaa ayaa aanu degenahay.
Waxa aanu dhawaan bilawnay ganacsi macaash badan. Sahra hooyadeed ayaa fooxa iyo beeyada barri nooga soo dirta. Saddexdayadu waanu ka adagnay wadida ganacsigan. Inta wadanka nalagaga iibsado waxa aanu ka helno waxa ka buuran inta u dhoofinta Itoobiya naga soo gasha.
Dhawr guri ayaanu meelo kala duwan ka dhisnay. Way se diideen xaasaskaygu in midiba guri degto. Farxadda wada jirka aanu u qaadano ayaa ay majeerteen.
Caawa ciyaar baanu daawanaynaa. Chelsea iyo Arsenal ayaa koob kala qaadaya. Wax kolna aan ku oriyo, kolna labadooda oo Chelsea wada taageerayey i dhego barjeeyaanba, waa ay iga guulaysteen.
Goooooooooooooooooooolkii ay maqleenba barkimooyin ayay ila boobeen. Sidaan uga gabanayey kolna gacan iskaga dhigayey ayaanu saddexdayaduba daallay. Anaga oo neef tuurayna ayaa aanu isku barbar dhacnay.
– Aniga: Dirqi baad caawa igaga badiseen. Kubad qurux badan baanu idinla ciyaarnay.
– Filsan iyo Sahra: Kubad quruxdeed garoonka ayaa aad kaga tagtay, koobkii anaga ayaa dhegaha qabanay.
– Filsan: Cabdi miskiintan habeenkeeeda ciyaar baa ku beeganta. Dhakhso soo xidha albaabka. Ayaa iyada oo sii kacaysa ay tidhi.
– Sahra iyo aniga: Mar baanu wada qosolnay.
– Aniga: Baxso Filsan waxba ha na soo eegine.
– Saddexdayadii: qosol dhaadheer baanu ku dhufanay/
– Sahra: Filsan istaag. Ayaa ay Filsan oo sii baxaysa ku tidhi.
– Filsan: Hee quruxeey?
– Sahra: Caawa iiin caadi ma ihi, dhiig baan leeyahay, qabso gacanta odayga.
– Aniga: Yaah!
– Filsan: Walaahi Sahra ma kaa runbaa?
– Sahra: Haa walaahi.
– Fisan: Kac Cabdi. Ayaa inta ay igu soo haaday oo gacanta I qabatay cod ay jejebinayso ku tidhi.
– Aniga: Sidan waan ku dhimanayaa, haddii aad isu kay bedeshaan. Intii aanan wax kale raacin ayaa Filsan gacan I jiiday tii kalena Sahri ila booday, oo I tukhaantukhiyeen.
Waa taa noloshayada qoysnimo.
Khaalid Ismaaciil Yuusuf